5 Soojiidashada Best For Kids In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 5 Soojiidashada Best For Kids In Europe
La dhoofidda caruurta midkood noqon kartaa qarow ama waqtiga ugu fiican ee aad noloshaada. Thanks to dabeecadood culus dhallaankayaguba 'oo doonayo in aan iyaga ku raaxeysan, sida caadiga ah ma jiro dhulka dhexe. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira siyaabo aad si ay uga la caruurta safarka sahlan naftaada. Habka ugu fiican ee loo sameeyo waa in la hubiyo da'da yar ee had iyo jeer wax la sameeyo ama arko. Si lagaaga caawiyo in aad raacdid degan, waxaan diyaarinay liistada 5 soo jiidashada ugu fiican ee kids in Europe. Waxaad si fudud u gaadhi karto dalal kuwan tareen. Aynu eegno:
Soojiidashada for Kids in Italy
Talyaaniga ayaa bixiya xoogaa soo jiidasho cajiib ah oo carruurta haddii ay la kulmaan taariikhi indhaha iyaga ma Dhectuuro. In Viserba firaaqada park, waxay arki karaan indhaha of Italy ee Ghadafi! park ayaa sidoo kale qoreysa a-wareega tago faraxsanaado, ardaagga, raacid kala duwan, iyo shineemo. Haddii kale, haddii aad ka heli naftaada ku Rome, waxaad tagi kartaa Hydromania biyo park. Just ka baxsan Rome, waxa uu ballan qaaday dad badan oo la raaceyso oo xiiso leh biyo, taas oo ka dhigaysa waxaa fiican ee kids.
Soojiidashada for Kids in England
Mid ka mid ah jiidashada ugu weyn ee kids ee England waa Bros Warner ah. Studios Samaynta of Harry Potter safar ee London. Si kastaba ha ahaatee, waayo, sahamiyayaal dhallinyarada xiiseynaya yaabka leh ee dabeecadda, Taariikhda Dabiiciga London ee Museum waa doorasho weyn. Waxaa jira badan oo soo bandhigaa kid-saaxiibtinimo halkaas oo ay ku baran karaan ku saabsan dinosaurs iyo nidaamka qoraxda. Waa wax weyn a waayo-aragnimo ka dhigaya London qiimihiisu booqashada qoysas.
Soojiidashada for Kids ee Nederland
Amsterdam Sida caadiga ah laguma talinayo sida qoysaska saaxiib caga, laakiin in macnaheedu ma aha ma aha hab in ay noqon kartaa. Wixii kids, laga yaabee in meesha ugu farxada badan waa Natura Artis Magistra ama fanaaniinta. Waa a beer weyn oo lagu buuxiyo quraaradda quraaradda, ciyaaraha, Buslhada Museum, iyo planetarium a. Waxaa qoreysa in ka badan 900 noocyada xoolaha!
Haddii kale, aad madax kartaa in Efteling in Kaatsheuvel. Waa park ugu weyn ee park dalka, la theme khiyaali ah oo diiradda la saarayo khuraafaadka iyo halyeeyadoodii hore. Waxaa jira raacid iyo madadaalo badan ee carruurta ku jira Cunid filand.
Marka ay timaado in maaweelada caruurta, Belgium waxay bixisaa ay park theme, Plopsaland. Waa midabo, full of coasters rullaluistemadka iyo barxado, oo uu leeyahay noocyo kala duwan oo mawduucyo ilmo kasta si ay ugu raaxaystaan. Waxay kaloo leedahay beer leh xoolaha ay carruurtu booqan karaan, iyo sidoo kale masraxa a iyo raacid doon.
Antwerp in Tareenadu De Panne
Mid ka mid ah jiidashada ugu caansan ee carruurta shaki la'aan waa Disneyland. Waxa aanu aad u hesho wax ka khayr badan mid ka mid ah in Paris. Waa park theme ugu caansan ee Yurub oo dhan sabab ah. Waxaa jira shan meelaha Kaapelitalo, iyo sidoo kale raacid iyo soo jiidashada badan. Qaar ka mid ah iyaga ka mid ah waxaa ka mid ah Parc Asterix, Burcad of Caribbean, Muuqdey Laser qaylo iyo Waa World ah Small. Booqashada Paris iyo France la kids ma aha dhamaystiran oo aan Disneyland.
Ready in ay fasax ah la ilaawi karin qoyska oo idil? Booqo qaar ka mid ah 5 soo jiidashada ugu fiican ee kids in Europe ka our liiska, iyo waxa aad helaysaa qarax. Hubi in ay qorsheeyaan aad fasax iyo jartaan tikidhka tareenka aad waqtiga!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-attractions-kids-europe%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml oo waxaad bedeli kartaa / de si / PL ama / iyo luuqado badan.
#soo jiidashada #traveleurope europetrains europetravel eurotrip tareenada tareen safarka safarka tareenka travelbelgium travelengland travelfrance travelitaly travelnetherlands traveltips
Waa Maxay daaraha ugu quruxda badan ee Europe
Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka Belgium, Tareenka Safarka ee Britain, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareenka Safarka Luxembourg, safarka Europe